माइकल: मार्टिन व्रिजल्याण्ड
विकृत ब्रिट DNB एम्स्टर्डम PsyOp बिना मनोचिकित्सक व्यक्ति को गिरफ्तार गर्न सक्षम हुन सक्छ?
मा दायर समाचार विश्लेषण	by मार्टिन भिजल्याण्ड	13 फेब्रुअरी 2019 मा	• 21 टिप्पणिहरु
विगत केही दिनहरुमा मृत अवस्थामा जन्मे ब्रिटन माइकल फेदेजको बारे मा एम्स्टर्डममा डे नेदरल्याण्डस् बैंकमा धेरै विवाद भएको छ। आलोचना उत्पन्न भयो किनभने मानिसले पुलिस द्वारा आत्महत्या गर्न चाहन्छ। साबुनको एक नयाँ घटनाले हाम्रो मिडियाले नकली समाचार सिर्जना गर्ने प्रबन्ध गर्दछ? किन [...]
कुल भ्रमण: 15.905.779
SalmonInClick op इरल्याण्ड ऑस्कर गल्जाार्ड को हो र इयुजेनिक्ससँग उसले के गर्नुपर्दछ?
तपाई किन यो जान्न चाहानुहुन्छ? op पोजिटिभ्मवाद र आशावाद!